Imishini yenkampani yephrinta yocingo yokudayiswa China Manufacturer
Incazelo:Umshini wephrinta yamakholi wefoni,I-Case Case yephrinta I-iphone 6,Ifoni yekholi yephrinta Ink
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Ifoni yephrinta yefoni > Imishini yenkampani yephrinta yocingo yokudayiswa
Ubunambitheka bomphakathi bomuntu ngamunye.Iphrinta yekhalenda yefoni , uma nje uthanda, yenza ubhekene nefoni / shell / cell cell, ecacile nobuciko, phakamisa ibanga lakho. Akuyona into enobuthi, engafanele, impilo engokwemvelo. besebenzisa i-eco solvent inkinobho yokuvikelwa kwemvelo yakamuva, umbala unamafutha omuhle, awunobuthi, awunamaphilisi, ukumelana ne-UV, ukuqinisekiswa kwamanzi ngemva kokumiswa kwezingubo eziguquguqukayo, ukumelana nokushisa, ukuguga, ukuguga, ukuwa, ukuguga Ukubheka, Akukho umonakalo emzimbeni womuntu. Iba ethandwa kakhulu emhlabeni jikelele. Phrinta kwi-Family Family setting Isimo sefoni / igobolondo / iseli, udonga lwesofthiwe, igumbi lokulala, igumbi lokudlela, igumbi lezingane, umzila, ipulaki, udonga lwezitebhisi, njll. Iphrinta ephrinta, iklabhu, inkampani yasendlini, isithombe senkampani, umdwebo wezinkulisa, isibhedlela sezinwele , yezitolo, njll.
Umshini Wephrinta Yenkampani Yefoni Ukudayiswa uhlobo lwemishini ye-digital ye-"non-contact" ye-jet uhlobo lwe-digital jet, uhlelo lwakho lokusebenza lukhulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo zoMshini Wephrinta Yomakhalekhukhwini We- RF-A3UV:
2. I- Case Case Iphrinta I-iphone 6 ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Ifoni Yenkampani Iphrinta Ink I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Umshini wephrinta yamakholi wefoni I-Case Case yephrinta I-iphone 6 Ifoni yekholi yephrinta Ink Umshini wephrinta yebhakhodi Umshini wephrinta weTile Izindleko zephrinta yekholi yefoni Umshini wephrinta kaCafel Selfie Umshini wephrinta we-Bag